စုချစ်သူ: ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေေ၀ ဆံပင်နှင့် ခေါင်းမြီးခြုံ ဖက်ရှင်
Posted by စုချစ် at 12/23/2011 09:56:00 AM
a ma su chit..
There's fake hair shop at Bugis Street level 2. I am not sure how much the price is. I saw some teenager girls are testing so hope it's not too expensive.
Thanks so much KoAP, I will go and takealook. Thks again and Happy Holiday to u!!!
ဟာ..တကယ့်ကို သီလရှင် ပါရမီရှင် ပါပဲလား။
( သာဓုပါတော် ) ရုပ်ရှင်ထဲက မိန်းမကြီးအသံ နှင့် ထွက်ဖတ်ရန်။
ဘာဖြစ်လည်း ..ကတုံးအတိုင်းပဲ နေပစ်လိုက်ပေါ့။ မစာမနာ ပြောခြင်း။း)
သူများ ကတုံးအတိုင်းပဲ နေ နေပါတယ်.... (အိမ်မှာ နဲ့ ရုံးမှာ ) လမ်းမှာတော့ မဟုတ်...
စာဖတ်တဲ့ထဲက သနားပြီး ဘယ်သူများ ချံပင်တုလေးများ လှူချင်စိတ် ပေါက်လာမလဲလို့....ဟိ
ဒီနေ့ မှအမေ၇းတဲ့ စာတွေ ပြန်ဖတ်၇င်း သီလ၇ှင်လူထွက်အကြောင်းလေး ဖတ်မိတယ်။ ညီမနဲ့ လည်း တိုက်ဆိုင်နေလို့အ၇မ်းကို သဘောကျမိတယ်။ ညီမက ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ မှာ ညီမ၇ယ် သမီးလေး၇ယ်က သီလ၇ှင်ဝတ်၊ ညီမအမျိုးသားက ပဉ္ဖင်းတက်ဖြစ်ခဲ့ တယ်။ သီလ၇ှင်လူထွက်၇ဲ့ ခံစားချက်တွေ အခက်အခဲတွေ ကတိုက်ဆိုင်နေတယ်။ ဒီမှာကတော့ သီလရှင်ဝတ်တဲ့ အကြောင်းလည်း မသိကြတော့ ၇ှင်းပြ၇တာလည်း မောနေတာဘဲ၊ ဆံပင်တု စွပ်လိုက်တော့မှဘဲ အေးတော့တယ်၊ အဲဒါနဲ့ ၆လလောက် ဆံပင်တုနဲ့၇ုံးတက်ဖြစ်ခဲ့ တယ်။
သိရတာဝမ်းသာပါတယ် ညီမခင်လေး.. မိသားစု ၃ယောက် ကုသိုလ်အတူတူလုပ်ဖြစ်တော့ ဝမ်းသာစရာကြီးနော်... :)